एमाले हाम्रो हो, केपी ओली पार्टी छाडेर गए हुन्छ : माधव नेपाल – नेपाली संगसार
Home राजनीति एमाले हाम्रो हो, केपी ओली पार्टी छाडेर गए हुन्छ : माधव नेपाल
राजनीति नेपाली संगसार	· March 23, 2021 ·0Comment
२२ सालमा राजनीतिमा होमिएको आफू बाधा पन्छाउँदै नदी अगाडि बढेजस्तै अगाडि बढेको उनले सुनाए । यो ठाउँसम्म आउन साथ दिएको भन्दै केही नेताको नाम लिए । कतिले साथ छाडेको भन्दै उनले भने, ‘ठाउँमा पुर्‍याइएकाले धोका दिएकाहरु पनि सम्झिइरहेको छु ।’
ओली हिटलरको नेपाली अवतार
पार्टी अध्यक्षमाथि निशाना साँधेका उनले ओली हिटलरको नेपाली अवतार भएको बताए । ओली व्यक्तिवादी र आफूहरुलाई संगठनवादी भएको दाबी गरेका उनले पार्टीको विवादलाई पदको झगडाको रुपमा नबुझ्न आग्रह गरे ।
यद्यपि ओलीले ‘असली एमाले हामी हौं’, ‘जबजको हिमायती हामी हौं’ भन्ने भ्रम छर्न खोजेको उनको दाबी छ । जबज र केपी ओलीको भेट कहिल्यै नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालले, ‘जबज भनेको बहुमतको निर्णयलाई मान्नु हो । उनले कहिल्यै बहुमतलाई टेरेका छैनन् ।’
साबिकको नेकपाको सबै कमिटीमा आफू अल्पमतमा परेपछि बैठक बस्न नमानेको तथा सचिवालयलाई हुल्लडबाज, स्थायी कमिटीलाई बाहुबली र केन्द्रीय कमिटीलाई सडक छापहरुको कमिटी भनेको भन्दै उनले अघि भने, ‘अहिले उनले आसेपासे र दासहरुलाई मात्र राखेका छन् ।’
जबजलाई मान्ने हो भने आलोचनात्मक चेत हुनुपर्ने र आलोचना सुन्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले ओली समूहमा भएका कोहीसँग पनि गलत कुराको आलोचना गर्ने हिम्मत नभएको बताए । जबजको अर्को मान्यता कम्युनिस्ट पार्टी पनि लोकतान्त्रिक तरिकाले चल्नुपर्छ भन्ने भएको भन्दै उनले भने, ‘आज केपी ओलीले सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका छन् । नेपाल हिटलरको अवतार भएका हुन केपी ओली ।’
उनले अघि भने, ‘यो जनताका बहुदलीय जनवाद होइन, केपी ओलीको निरंकुशतावादी अधिनायकवाद मात्र हो, यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्नँ ।’
२०५१ सालबाटै गुटबन्दी सुरु गरेका ओली नवौं महाधिवेशनमा जालझेल गरेर नेतृत्वमा आएको र ओली प्रवृत्तिका कारण पार्टीमा समस्या भएको नेता नेपालको दाबी छ । उनले अघि भने, ‘हामी पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौं, तर कसैको दास बन्न पनि तयार छैनौं ।’
हिम्मत छ निकाल्ने ?
वैचारिक जगमा पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहेको र कार्यकर्ता भेला गरेर निराश कार्यकर्तामा उत्साह जगाएको भन्दै उनले भने, ‘स्याबास भन्नुपर्ने कारबाही गर्छु रे । पार्टीको अध्यक्षले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने होइन ?’
नेकपा हुँदा केपी ओलीलाई अध्यक्ष र पार्टी सदस्यबाट किन हटाएको ? पार्टी फुटाउन निर्वाचन आयोग किन गएको ? अविश्वासको प्रस्तावमा किन हस्ताक्षर गरेको ? पार्टीको बैठकमा किन नआएको ? लगायतका प्रश्न गरेर कारबाही गरी किन ननिकाल्ने भनेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालले भने, ‘हिम्मत छ निकाल्ने ? निकाल्नुस् त ! सहेर बसिन्छ ?’
आफूहरु नलत्रिएको भन्दै उनले मुस्लिम, दलित, मजदुर, बुद्धिजीविलगायतका जनवर्गीय संगठनको राष्ट्रिय भेला गर्ने तयारी भइरहेको बताए । त्यसपछि जिल्ला भेला सुरु हुने भन्दै नेता नेपालले भने, ‘जिल्लाजिल्लामा तरंग पैदा गर्नेछौं । नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन संगठन प्रत्येक जिल्लामा संगठन निर्माण र सुदृढिकरण अभियान चलाउने छौं ।’
केपी बिमाले, सिमाले हुन्
नेता नेपालले एमाले आफूहरु भएको बताएका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली विमाले, सिमाले भएको भन्दै उनले भने, ‘केपी ओलीले जालझेल गरेर पार्टी कब्जा गरे भने विचार गरौंला । होइन भने नेकपा एमाले हाम्रो हो । केपी ओली बिमाले हुन्, सिमाले हुन्, यो पार्टी छोडेर गए हुन्छ ।’
उनले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीमाथि राजावादीसँग साँठगाँठको आरोप समेत लगाएका छन् । तर अब नेपालमा राजतन्त्रमा फर्किन नसक्ने भन्दै उनले भने, जतिसुकै साँठगाँठ गरुन, राजावादीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरुन, हुर्काउने प्रयन्त गरुन, त्यसलाई विफल पारिछाड्ने छौं ।’